ဖေ့ဘွက်မှာ Report တင်မယ်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » ဖေ့ဘွက်မှာ Report တင်မယ်….
ဖေ့ဘွက်မှာ Report တင်မယ်….
Posted by တိမ်မည်း on Jun 21, 2013 in Know-How, DIY | 14 comments
ဖေ့ဘွက်မှ အမြင်မကြည်လင်နေသော ကော်မန့် များအတွက်...
အခုတလော စိုးရိမ်စရာလေးတွေမြင်လို့တချို့ လည်း သိပီးတော့ ဖြစ်မှာပါ… သို့ ပေသိ မသိသေးတဲ့ သူတွေ သိစေလို့ တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အောက်ပါ Guide line တချို့ ကို ရေးပါတာပါ… ဘယ်မှာ သုံးလို့ တော့ မပြောချင်ပါဖူး… အဆင်ပြေသလို သုံးကြပေါ့နော်….. အထူးသဖြင့် ကိုယ့်က မကြည့်ခြင်မမြင်ချင်ဖြစ်လောက်အောင် ဖလန်းဖလန်းထနေတဲ့သူတွေ ကိုယ့်ကို ဘလိုင်းကြီး စော်ကားနေတဲ့သူတွေ မမြင်အောင် လုပ်တာပါပဲ….. ဘယ်လို လုပ်သလဲဆိုတော့……
ရိုးရိုး ဘလော့ လုပ်ခြင်း….
၁. ဖေ့ဘွက် ကော်မန့် ပိုင်ရှင်ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်လေးမှာ မော့စ်လေးရွေ့ ပီး တင်လိုက်ရင် ကြက်ခြေခက် အပြာရောင်လေးနဲ့ စာတန်း Hide ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်… အဲ့ဒါလေးကို နှိပ်ပါ….
၂. အဲ့အမှားလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် The comment has hidden ဆိုပီး Unhide ရယ် Report ရယ် Block (username) ပီးတော့ တချို့feedback to (username) ဆိုပီး ပေါ်လာပါတယ်… (username) ဆိုတဲ့နေရာမှာက ကော်မန့် ပိုင်ရှင်နာမည်ပေါ့နော်… အဲ့မှာ Block ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ပါ….
၃. Confirm Block ဆိုပီး Dialog Box လေး တခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်… အဲ့မှာ ကော်မန့် ပိုင်ရှင် ကို တကယ်ဘလော့မှာလား ဘလော့လိုက်ရင် ကော်မန့် ပိုင်ရှင်ရဲ့ ကော်မန့် တွေ တင်တဲ့ပို့ စ်တွေ မမြင်ရသလို သူကလည်း ကိုယ့်ကို Tag လုပ်တာတို့ပို့ စ်လာတင်တာတို့လုပ်လို့ မရသလို သူငယ်ချင်းဖြစ်နေရင် Unfriend ဖြစ်သွားမယ် စသဖြင့် အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြထားပါတယ်… အဲ့နေရာမှာ Confirm ကို နှိပ်လိုက်ရင် Block ဖြစ်သွားပါပီ… သင်စဉ်းစားချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ Cancel နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆို ဘလော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဖူး……..
ဖေ့ဘွက်သို့ရီပို့ တင်ပီး ဘလော့ လုပ်ခြင်း…
(ဒါလေးကတော့ အကြောင်းအရာတခုခုနဲ့ဆက်သွယ်ပီး ရီပို့ ပါတွဲတင်တာ… မြင်အောင် ပြောရရင်ဖြင့်… သူငယ်ချင်း ဘ၀က အဆက်ဖြတ်တာတင်မကဖူး… ကျောင်းအုပ်ကြီး အခန်းထိ အရောက်ပို့ တာ…. )
၂. အဲ့အမှားလေးကို နှိပ်လိုက်ရင် The comment has hidden ဆိုပီး Unhide ရယ် Report ရယ် Block (username) ပီးတော့ တချို့feedback to (username) ဆိုပီး ပေါ်လာပါတယ်… (username) ဆိုတဲ့နေရာမှာက ကော်မန့် ပိုင်ရှင်နာမည်ပေါ့နော်… အဲ့မှာ Report ဆိုတာ နှိပ်လိုက်ပါ….
၃. အဲ့မှာ Is this comment about you orafriend? ဆိုတဲ့ Dialog Box လေးတခုပေါ်လာပါမယ်… ဥပမာ ကော်မန့် ပိုင်ရှင်က လူမျိုးရေး မုန်းတီးရေး ကိစ္စပြောတယ်ဆိုပါစို့ … ဒါဆို Hate Speech ရွေးလိုက်ပါ… ဘေးနားမှာ Drop Down Box လေးပေါ်လာပါမယ်…. အဲ့မှာ Target to ဘလာဘလာ ဆိုပီး လေး ခုလောက်ဆိုပါတယ်… ဘာသာရေးဆို ဘာသာရေး လူမျိုးရေးဆို လူမျိုးရေးပေါ့…. ရွေးလိုက်ပါ ပီးတော့ Contonue ကိုနှိပ်ပါ….
၄. အဲ့ဒီမှာ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခု ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်… တခုက ကော်မန့် ပိုင်ရှင် ကို မက်စေ့ ပို့ ပီး ဒီကော်မန့် ကို ဆန့် ကျင့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဖြုတ်ချပေးဖို့တောင်းဆိုတာရယ်… နောက်တခုက ကော်မန့် ပိုင်ရှင် ဘလော့လုပ်ဖို့ ရယ်…. သင်ကြိုက်တာ တခုရွေးလိုက်ပါ… ကျွန်တော်ကတော့ ဘလော့ပေါ့နော်…. ပီးတော့ အောက်နားမှာ Report to Facebook ဆိုတဲ့ Check box လေးကို အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (အဲ့ဒါက ကျောင်အုပ်ကြီး အခန်းထဲပို့ တာ… ဟီး) … ဒါဆို ဖေ့ဘွက်ကို ရီပို့ တက်သွားပါတယ်…. အခုတလော ဖေ့ဘွက်လည်း လူမျိုးရေး ဘာသာရေး နဲ့မုန်းတီးရေး ၀ါဒီတွေကို ဖယ်ရှားပေးဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်… ကျွန်တော်တို့ဒီလို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် တဖက်တလမ်းကနေ ကူညီရာရောက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်… ပီးရင် Continue လေး နှိပ်ပေါ့နော်….. Cancel ကို နှိပ်ရင်တော့ နောက်ပြန် ဆုတ်နိုင်ပါသေးတယ်… အဲ့ဒါဆို Comment Hidden လေးပဲဖြစ်သွားမှာပါ…..
၅. အဲ့မှာ ဖေ့ဘွက်က Report ကို လက်ခံရရှိကြောင်း… တကယ်လို့report ကို နှိပ်ခဲ့ရင်ပေါ့…. အဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းကြောင်း… ကော်မန့် ပိုင်ရှင်ကို ဘလော့ လိုက်ပီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူနဲ့ မည်သည့်အဆက်အသွယ်မှ မရှိတော့ကြောင်း အကြောင်းကြားတဲ့ Dialog Box လေးတွေ့ မှာပါ… Okay ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရပါပီ…..
လိုအပ်နေတာလေးတွေ…. သိချင်တာလေးတွေရှိရင်… ထောက်ပြပါနော်… ကျွန်တော့် တက်နိုင်သမျှ ဖြေပေးသွားပါ့မယ်……. မှတ်သားထားပါ့မယ်….
ဖတ် မှတ် လေ့လာ သင့်တာ လေး မို့ 
ဟိုတစ်လောက ဖေ့ဘုတ်မှာကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့အစ်မပုံတွေကို တင်ပြီး စော်ကားနေတဲ့ အကောင့်တစ်ခုကို report လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာတယ်…။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီး ရီပို့ လုပ်ကြတာ အဲဒီအကောင့်ပျက်သွားတယ်ထင်တာပဲ…။
ဘလော့ တဲ့ အကြောင်းတွေ လာလာမပြောကြပါနဲ့။
အော် ငို ချင် လာ လို့ ပါ။
ခုထိ ရီပို့ အလုပ်မခံရသေးလို့။
မင်းမင်း >> အဲ့ဒါမျိုးက ပို့ သာပို့ ပစ်…. ဒါက ယောကျာင်္းထုကြီးကို စော်ကားတာ…. ချ….
အလင်း ဆက် >> သိမ်းပါဂျာ…
Ma Ei >> သုံးလိုက်လို့ရလာတဲ့ result လေးတွေကို share ပေးပါလားဟင်… ဗဟုသုတရတာပေါ့… ဟီး
ကောင်းကို >> သူငယ်ချင်း ကောင်မလေး တယောက်က သူမျက်နှာကို Profile တင်ပီး ပေါက်ကရတွေ ထိုင်ပြောနေလို့အဲ့လို တခါ လုပ်ရဖူးပါတယ်… အကောင့်တော့ မပျက်ပေမယ့် Profile ပြုတ်သွားတယ်… Report လုပ်လည်း ကြည့်လုပ်ပေါ့ကွယ်… တချို့ က ဖေ့ဘွက်ကို အသက်လို ချစ်ကြတာ…..
KZ >> ဘာတွေ သွားလုပ်ထားလို့အော်ငိုချင်နေတာလဲ… Report အလုပ်ခါရနီးအောင်လည်း ဘာတွေ လုပ်ထားလဲ မသိ… စင်ကာပူလေ ၀အောင်ရှူနော်… ရှူရခဲတယ်….
ကျုပ်ကတော့ လူတိုင်းအပေါ် အပြစ်မမြင် ချစ်ခင် စေတနာထားသူဆိုတော့ဂါ…
ဒါတွေမလိုပါဘူး သို့ပေသော်ငြား အခြားတစ်ပါးသူများ လိုအပ်ပါက
အသုံးပြုနိုင်စေရန်ဆိုပြီး စေတနာ မေတ္တာ ဂရုနာ တရားရှေ့မှာထားပြီးးး
အဟီး… အစကတော့ ကိုယ်လည်း မလုပ်တတ်ပါဘူး …
ဖွဘုတ်သုံးရင်း အတုယူပြီး တက်လာတဲ့ ပညာဆိုလို့ အိုက်ဒါဗြဲ ချိတယ် … ။
တောက်ညစ်ကပ်တဲ့သူတွေ အကုန် Report တင်ပစ်မယ်…
မမ wow .. တမီးအောက်မှာ ဂလိုရေးဒါချိုတော့… တမီးကိုပျော့စ်ဒါယာာားးးး
အိုကီ .. အိုကီ ..
လက်တွေ့ စမ်းကျိအုံးမယ် …